Torohevitra dimy lehibe hananganana paikadin'ny votoatin'ny fitarihana eritreritra | Martech Zone
Ny areti-mandringana Covid-19 dia nanasongadina fa mora ny manangana - ary manimba - marika iray. Eny tokoa, ny toetoetran'ny fifandraisan'ny marika dia miova. Ny fihetsem-po dia mpamily fototra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, saingy izany tokoa Ahoana no marika mifandray amin'ny mpihaino azy izay hamaritra ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny post-Covid.
Manakaiky ny antsasaky ny mpanapa-kevitra no milaza fa ny votoatin'ny fahaiza-mitarika eritreritry ny fikambanana dia mandray anjara mivantana amin'ny fahazarany mividy 74% amin'ireo orinasa no tsy manana tetikady fitarihana an-toerana.
Edelman, Fianarana momba ny fiantraikan'ny fitarihana B2020B 2
Amin'ity bilaogy ity dia hizaha torohevitra dimy tsara hananganana paikady fitarihana fandresena azo:
Tip 1: Mifantoha amin'izay tadiavin'ny mpandray anjara avy amin'ny orinasanao
Mety ho toa fanontaniana lehibe io saingy ny fahaiza-mitarika eritreritra dia ny fampisehoana ny fahaizan'ny orinasanao fa tsy hampiroborobo ny isam-batan'olona. Mba hanaovana izany amin'ny fomba mahomby, dia tsy maintsy jerenao izay olana hatrehin'ireo mpihaino anao telo, efatra, dimy taona ho avy. Fomba fitarihana eritreritra miorina amin'ny fikarohana qualitative sy qualitative, manome fahitana stratejika momba ny tsena, dia hiantoka fa tsy vita ny hetsika fifandraisana. amin'ny finiavana, fa natokana ho an'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fomba fitadiavana data momba ny fitantarana.
Soso-kevitra 2: manaova fahitana mazava tsara momba ny fiantraikan'ny fahaiza-mitarika eo amin'ny fivarotana
Indrindra amin'ny tontolo B2B, ny fividianana dia mety ho sarotra sy sarotra. Ny fahaiza-mitarika eritreritra dia mety hanana anjara toerana lehibe amin'ny fampisehoana ny antony mahatonga anao ho safidy tsara indrindra amin'ilay asa. Mazava ho azy fa fifandanjana marefo izany satria - tsy toy ny marketing amin'ny atiny - ny fitarihana dia tsy afaka mampiroborobo ny vokatra na serivisy be loatra. Ny fikarohana momba ny indostria dia mandresy am-po sy saina, mamorona tolo-kevitra sarobidy mifototra amin'ireo zavatra izay manan-danja indrindra amin'ny mpihaino anao.
Tip 3: Ianaro izay mahatonga anao ho azo atokisana indrindra
Elaela ny fotoana ahazoana fitokisana, indrindra amin'ny tsena tototry. Satria ny fifandraisana niomerika no hany fomba tokana hahatratrarana ny mpihaino nandritra ny areti-mandringana, dia tototry ny votoaty ny olona, ​​ka mitarika reraka tsy azo ihodivirana. Manentana anao izahay hijery ny herin'ny hery miasa mangina amin'ireo mpanafika indostrialy toa ny orinasam-barotra, mpanjifa ary mpiara-miombon'antoka mba hijerena ny fahaiza-mitarika. Izany dia hanampy amin'ny fananganana fahatokisana eo noho eo izay mety handany taona maro hananganana.
Soso-kevitra 4: Aza avela hijerena havizanana ny paikadinao
Ny fananganana lohahevitra vaovao dia fanamby goavana ho an'ny ankamaroan'ny mpitarika eritreritra, fa raha manakaiky izany ianao amin'ny zoro manompo tena, dia ho avy eo dia ho voan'ny rindrina ianao. Ny mpanao gazety, ohatra, dia tsy lany zavatra holazaina velively satria mitady zava-baovao mitranga ao anatin'ny faritry ny fahaizany. Ary tsy mijanona mihitsy ny vaovao. Mieritrereta toa ny mpanao gazety, ataovy lohalaharana ny fikarohana tsy tapaka izay mitondra fanazavana vaovao sy feno fahitana amin'ny 'vaovao' lohahevitra izay zava-dehibe amin'ny mpiray antoka aminao.
Soso-kevitra 5: Tsy azo atao ny manamarina ny maha-azo itokiana
Raha fintinina: asehoy ny mpihaino fa ao anatin'ny fotoana maharitra ianao. Ny fitarihana eritreritra dia tsy ny fampisehoana amin'ny olon-drehetra fa mahay sy mahomby ianao. Tsy ny maha-edgy anao ihany koa izany. Ny fahaiza-mitarika eritreritra dia ny fampisehoana fahaiza-manao sy fampisehoana fa eo ianao manodidina hamaha ny olana ankehitriny sy amin'ny ho avy. Hamarino tsara fa ny lohahevitry ny votoatinao, ny feon'ny feonao ary ny angon-drakitrao dia tena izy ary tena maneho ny zavatra ijoroanao.
Amin'ny vanim-potoanan'ny serasera multichannel dia tsy zava-dehibe loatra ny famolavolana fomba fitarihana eritreritra izay tena izy ho an'ny orinasanao, manampy lanja ny mpanjifa ary manapaka ny tabataba. 2021 no mety ho taonanao hiakatra sy ho re.
Tags: maha-azo itokianaharerahana atinyfifandraisana nomerikaLeadershipomnichanneleritreritra fitarihanafahitana
Marketing amin'ny fofona: statistikan'i, science science, ary ny indostria